एनआरएनएको नवौँ क्षेत्रीय सम्मेलन अमेरिकाको न्युजर्सीमा – Nepal Parikrama
क्यालिफोर्निया । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को नवौँ क्षेत्रीय सम्मेलन अमेरिकाको न्युजर्सीमा हुन गइरहेको छ ।
नेपालमा ग्लोबल सम्मेलन हुने र अर्को वर्ष क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा नेपालबाहिर ग्लोबल सम्मेलनका रूपमा गर्ने गरिएको छ । योभन्दा पहिलाको क्षेत्रीय सम्मेलन जापानमा गरिएको थियो । सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संयोजकमा सोनाम लामा, सहसंयोजकमा एसी शेर्पा, डा केशव पौडेल र तुलसी सापकोटा तथा सदस्यहरूमा नवराज गुरुङ, रतनकुमार झा, खगेन्द्र जिसी, कृष्ण पोखरेल र तिलक श्रेष्ठ रहेको नौ सदस्यीय आयोजक समिति र अन्य २० कमिटीसमेत बनाइएको छ ।
अगस्त २७ र २८ मा हुने उक्त सम्मेलन ‘एनआरएनए भिजन ट्वेन्टी एण्ड वियोण्ड’ भन्ने नाराका साथ हुन गइरहेको सहसंयोजक तथा एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले बताउनुभयो । सन् २०१० मा टेक्सास राज्यको हिउज्टनमा क्षेत्रीय सम्मेलन गरेको संस्थाले अमेरिकी एनआरएन सशक्त भएर आएको हुँदा यसलाई महत्व दिनका लागि पुनः अमेरिकामा नै गर्न अवसर दिएको अध्यक्ष डा. पौडेलले बताउनुभयो ।
Published On: २४ असार २०७३, शुक्रबार २०:१२